Smartphone E-ZY A6, finday mikendry ny antitra | Androidsis
Manuel Ramirez | | hevitra, SmartWatch
Raha mitady finday avo lenta isika amin'ity Krismasy ity ka ny zokiolona ao an-tranontsika izay te-hanavao ny findainy taloha miaraka amina «Smart» sasany, azo antoka fa ity finday Haier ity no hanomboka amin'ity karazana fitaovana ity.
Satria ity no endri-javatra mahaliana indrindra amin'ny smartphone tonga ho an'ny mpihaino manokana Izay tsy handoavam-bola firy amin'ny fanaovana fampiharana toa ny WhatsApp sy ny maro hafa izay saika ilaina isan'andro isan'andro mba hifandraisana ary tsy hahatsapa ho "nafindra toerana". Ity no hatsarana faratampon'ity telefaona Haier izay hilazalazainay eto ambany ity hahafantaranao izay ho karakarainao rehefa efa anananao izany.
Amin'ity toerana ity, Haier dia tsy manandrana zavatra hafa ankoatry ny mitondra andiana toetra tena mahaliana ho an'ireo be taona. Raha lazaintsika fa misy a bokotra fiantsoana vonjy maika Nandritra ny fotoana sasany nitakian'izy ireo ny sain'ny olona dia efa azonay fantarina fa ity telefaona Haier ity dia voafetra ho an'ny mpihaino izay tsy te hisavoritaka be amin'ny interface maoderina kokoa, toy ny an'ny smartphone amin'ny Android 6.0 Marshmallow.
Izany dia mitondra antsika any fampiharana efa napetraka mialoha izay aseho ho an'ny mpampiasa ambaratonga voalohany sy fahaiza-manao andiany amin'ny fakantsary sy ao amin'ny fitaovana izay midika fa afaka mankafy azy ianao nefa tsy manahy momba ny bateria.
Ity telefaona Haier ity dia manana Android version miaraka aminy ny sosona anao manokana ary ny interface misy sary masina lehibe, satria ny heviny dia ny fotoana ianarana ho an'ny mpampiasa mbola tsy nikasika finday avo lenta mihitsy.
Amin'ity no ilazantsika fa ity telefaona ity dia ny voalohany izay tokony ananan'ny olona efa lehibe na fidirana an-taonany, ka rehefa afaka kelikely dia afaka manakaiky ny iray amin'ireo maro izay ianarantsika avy amin'ireo andalana ireo.
1 Ny interface
3 Famakafakana video
4 Mazava ho azy
Ny interface amin'ity finday ity dia tena tsotra ary mametraka antsika amin'ny toeran'ny fahazoana haingana azy io. Eto tsy afaka hametraka launcher izahay na karazana zavatra hafa azontsika atao amin'ny Android mahazatra.
Ho an'ny mpampiasa mahazatra dia tsy hahalala firy izy io, saingy efa nolazaiko fa tonga ho an'ny vondron'olona mpampiasa ity finday ity tsy te hanasarotra zavatra izy ireo ary te hanana ny fampiharana malaza indrindra izy ireo nefa tsy mihoatra an'io.
Izy io dia voaforona efijery telo lehibe, izay ny voalohany dia ho an'ny fifandraisana izay afaka mifidy amin'ny fandaharam-potoana. Ny manaraka dia ho an'ny fampiharana fandefasan-kafatra, radio FM sy maro hafa, toy ny amin'ny fahatelo.
Azonao atao ny miditra amin'ny Bara fampandrenesana mahazatra an'ny Android ary inona no mety ho fanalahidy virtoaly avy eo amin'ny ilany ankavanan'ny efijery, satria ny lakilen'ny trano ihany no hampiasaintsika amin'ny fotoana rehetra handehanantsika any amin'ny axis afovoan'ity telefaona ity, dia ireo efijery telo ireo.
Avy eo manana ny safidy ifotony ao amin'ny Android isika hiditra ao amin'ny sehatra, saingy eto mbola tena fototra izy ireo izay ahafahantsika misavika fampahalalana sasany toy ny adiresy mac an'ny finday. Tsy manan-tsafidy hametraka fampiharana misimisy kokoa izahay raha tsy mampiditra ny APK amin'ny telefaona ary mampihetsika ny fametrahana fampiharana avy amin'ny loharano tsy fantatra. Midika koa izany fa ny mpampiasa vao manomboka dia tsy manelingelina azy amin'ny alàlan'ny fametrahana apps, ka tsara ho an'ny olona iray ny manampy azy ireo hametaka fampiharana bebe kokoa raha mila izany izy ireo.
Inona no mahatalanjona ananantsika Viber, WhatsApp ary WeChat afaka mifandray amin'ny fianakaviana sy namana.
Ity Haier E-Zy ity dia manasongadina a Radio FM tsy mila headphones, fakan-tsary tena tsotra na safidin'ny jiro. Ny tena mahavariana dia ny bokotra vonjy taitra sy ny penina izay azontsika alaina avy amin'ny finday satria manana ny toerany izy. Izy io dia manana bokotra ho an'ny sy ho azy, ambony sy midina ny habeny.
Amin'ny famolavolana plastika miaraka a mikasika kely kanto sy mahonon-tena, tonga lafatra ho an'ny karazan'ireo mpampiasa kendrena mena mena. Ny refy dia 130 x 65,5 x 11,8 milimetatra miaraka amin'ny lanjan'ny 145 grama.
La efijery TFT efatra santimetatra ary manana famahana 800 x 480. Manaraka ny tsipika mitovy amin'ny fitaovana rehetra an'ity telefaona ity ho ara-dalàna. Aza manantena zavatra betsaka avy aminy koa.
Amin'ny maha-fitaovana fanampiny mahaliana izay mitondra miaraka aminy dia fototra iampangana tonga lafatra hameno ny telefaona tsy misy fahasarotana lehibe. Izy io dia manana jiro LED hitady ny finday ao anaty maizina ary inona no mety ho fehy hanantonana ny telefaona manodidina ny hatoka.
Mba hamaranana ny hevitra momba ny Bateria 1700 mAh izany ho an'ny telefaona fototra toy izany dia manome fahaleovan-tena tsara hatramin'ny 72 ora amin'ny fiaretana. Telefaona iray mitentina 120 euro mazava ho an'ny karazana mpampiasa sasany ary misy zavatra mazava be momba an'io.
Efijery 4-inch misy 800 x 480 TFT 233 ppi vahaolana
Fantsona dual-core MediaTek (MTK6572M) amin'ny 1 Ghz
4GB fitadidy anatiny aorina hatramin'ny 32GB
Fakan-tsary aoriana 2MP misy tselatra
Radio FM tsy misy écouteur
Haier Easy UI miorina amin'ny Android
Bokotra vonjy taitra
Bateria azo esorina 1.700 mAh
Refy: 130 x 65,5 x 11,8 mm
Milanja: 145 grama
Nohazavaiko tsara tamin'ny voalohany ny karazana mpihaino kendren'ity telefaona ity ary ireo beantitra no maniry ny hanana WhatsApp ary fampiharana hafa amin'ny telefaona tsy misy ahiahy lehibe.
Miaraka amin'izany voalaza izany, mahafeno tsara ny endriny sy ny fitaovana rehetra misy azy io na dia misy bokotra vonjy maika na stylus aza. Ka raha nitady ianao fanomezana tsara toy ny telefaona Ho an'ny sasany amin'ireo havanao efa zokinjokiny amin'ity Krismasy ity dia mety ho ity finday ity no mety indrindra amin'ity asa ity.
Hafainganana amin'ny fianarana
Tena mahavita tsara azy io
Ny bokotra vonjy maika sy ny volo
Tsy afaka apetraka ny Play Store
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Manadihady finday ho an'ny tranainy indrindra ao an-trano izahay: Haier E-ZY Smartphone A6
Inona no finday na fampiharana azo atolotra ho an'ny jamba: Misaotra anao
ZTE Blade S7, nanolotra ny smartphone finday avo lenta vaovao miaraka amin'ny famaranana premium